Ebe maka njem ihunanya | Akụkọ Njem
Maria | | Getaways, Ihunanya
Foto | Dolors Joan Photography site na Flickr
You na-eche na gị na onye gị na ya ga-alanahụ? Ọ bụ atụmatụ na-ejikọ ọtụtụ ihe n'ihi na a na-akọrọ ahụmịhe, a na-achọpụta ebe ndị pụrụ iche ọnụ ka anyị na-anọ na họtel mara mma ma na-eme ihe ndị na-eme ka anyị pụọ na usoro ahụ. N'ihi ya, ọ bụ oge a na-agaghị echefu echefu! Kedu ebe ị ga - ahọrọ maka njem ịhụnanya ị ga - ahọrọ? Ọzọ, anyị na-amam ọtụtụ dị iche iche.
Na nso Mediterenian, na ókè-ala n'etiti Catalonia, Valencia na Aragon ma zoo n'etiti Maestrazgo, Bajo Aragón na ndịda nke Tarragona Mpaghara Teruel nke Matarraña dị, ókèala nke na-echetara Tuscany Italiantali a ma ama n'ihi ọdịdị ala almọnd, oliv na osisi pine yana obodo ndị ochie ya. nwere mmetụta sitere na Gothic, Mudejar na Renaissance art.
Obodo Calaceite nke akụkọ ihe mere eme bụ otu n'ime nchekwa kachasị mma na Teruel, ọ bụ ya mere ejiri kwue na ọ bụ Ebe nrụọrụ akụkọ ihe mere eme. Zọ gara ileta obodo ahụ bụ isi site na Plaza Mayor, site n'okporo ámá ya mara mma ebe ị nwere ike ịhụ ụlọ ndị eji okwute rụọ nke nwere ihu igwe arụ, ụfọdụ ụka ma ọ bụ n'ámá dịka Los Artistas.
Plaza Mayor bụ ebe etiti obodo ahụ. Arcades ya mara mma na nnweta ya n'okpuru steepụ kpuchiri. N'okpuru arcades nke square bụ ahịa na ọ bụkwa ebe a na-anwale ikpe ọha, ihe ngosi ehi na ebe ndị agbata obi na-ezukọ na nzukọ.
Halllọ nnukwu ọnụ ụlọ obodo ahụ sitere na narị afọ nke 1613 na ọ dị n'ụdị Renaissance. N’elu ala ya nwere ulo nga na ahia azu na n’elu ala mbu nke ulo oru ndi obodo na ulo nzuko nke nwere otutu okwu site na XNUMX. O na edobekwa otutu akwukwo na akwukwo ndi ozo site na narị afọ nke iri na atọ. N'ogige ahụ enwere igodo Gothic sitere na ụlọ ụka ochie nke parish, ochie Gothic obe nke a kpaliri site na Plaza Nueva na nnwere onwe site na ọkara nke abụọ nke XNUMXth narị afọ.
Na Calaceite, ụka nke narị afọ nke 2001 nke La Asunción bụkwa ihe kwesịrị, otu n'ime ọrụ baroque kachasị mkpa nke Matarraña nke e wuru na foduru nke ụlọ ụka Gothic ochie nke Santa Maria del Pla site na mbido narị afọ nke XNUMX na akụkụ obere . Na mpụta, ụlọ elu na ihu ahụ nwere ọnụ ụzọ atọ kwụ ọtọ, nke ogidi ndị Sọlọmọn pụtara. E kwupụtara ya Akụ nke Mmasị Omenala na XNUMX.
200 kilomita n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Rabat dị Fez, obodo ọdịnala na okpukperechi nke obodo Alhauita yana obodo World Heritage. Ọ bụ ebe kachasị mma maka njem ịhụnanya na ịchọpụta ezigbo Morocco, ebe ọ jisiri ike ichekwa ọdịnala ya na ụzọ ndụ ya ma e jiri ya tụnyere obodo ndị ọzọ ndị njem nleta Moroccan dị ka Marrakech ma ọ bụ Casablanca.
Obí eze, ụlọ arụsị, madrasas na mgbidi na-agba akaebe banyere oge gara aga nke Fez, obodo ochie nke alaeze kemgbe Qarawiyn, mahadum Koranic na ụlọ alakụba, hiwere na narị afọ nke 789. Obodo nke nde mmadụ na ọkara bi na ya ma kee ya ụzọ atọ nke gosipụtara akụkọ ntolite ya: Fez el Bali (obodo ochie nke hiwere na XNUMX nke Idrís I) Fez el Jedid (nke Merinids wuru na narị afọ nke XNUMX ) na New Town (nke ndị France wuru na Hassan II n'okporo ụzọ wuru isi ya.)
Nke dị na Fez bụ medina echekwara kacha mma na mba Arab yana nnukwu ihe ncheta kachasị na Morocco. Nnukwu netwọk a dị na narị afọ nke iteghete, ọ na-egosipụtakwa ihe na-acha anụnụ anụnụ nke ọnụ ụzọ ámá Bab Bou Jeloud, nke ị na-esi abanye n'akụkụ kacha ochie nke obodo ahụ na ebe okporo ụzọ na-adịghị, asphalt ma ọ bụ skyscrapers.
Ihe kachasị baa uru bụ ịkpọzite onye ndu iji gosi anyị ihe nzuzo niile nke Fez n'ihi na ọ bụghị otu ihe ịga ije n'okporo ámá labyrinthine na-enweghị isi karịa onye maara medina ahụ zuru oke.
Na 2017 a họpụtara ya ka ọ bụrụ ebe kachasị mma Europe site na ụlọ ọrụ ndị njem nleta kachasị mma nke Europe maka ọpụpụ ịhụnanya. Obodo nke nwere ịhụnanya na obodo ochie ya, bụ nke 1996 kwupụtara na 1996 World Heritage site na UNESCO. Ihe onyonyo anyi nile nwere na Porto bu nke osimiri di n’akuku ya, nwere udiri ugbo mmiri na ulo ochie ndi ahu mara nma. Ncheta echefughi echefu.
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ otu n'ime ebe ndị kachasị ndụ na obodo ahụ ịnụ ụtọ mmanya Port na ụfọdụ ụdị nri ndị a nke obodo Portuguese. Agbanyeghị, ịgagharị n'etiti ga-enyere anyị aka ịchọpụta Stock Exchange Palace, Katidral ma ọ bụ ọdụ ụgbọ oloko San Bento a ma ama, n'etiti ọtụtụ ebe ndị ọzọ nwere mmasị.
Isi obodo Czech Republic nwere ihe niile: ọ mara mma ma dịkwa ọnụ ala. N'ezie, ọ mara mma nke ukwuu nke na ị ga-eche na ị na-arọ nrọ akụkọ ifo, karịa ihe zuru ezu iji mee njem ịhụnanya na Prague.
Akụkọ ihe mere eme nke obodo a gosipụtara n'ọtụtụ nnukwu ụlọ ihe atụ na ihe ncheta ndị gbasasịrị n'akụkụ ya niile. Olee ihe di na nwunye ga-eme? Site na ndị ochie dị ka ịgafe Charles Bridge a ma ama ka ị furu efu na cafes ndị dị ịtụnanya na ogige mara mma pụrụ iche. Gaa na nkeji iri na asaa nke ndị Juu, Wenceslas Square, nnukwu ihe owuwu nke Hradcany Castle na akara ngosi ndị ọzọ nke Prague, Katidral St. Vitus, na ndị ọzọ.
Na nkenke, Prague bụ ezigbo ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na mmalite nke ụkpụrụ ụlọ Europe maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku afọ iri: Romanesque, Gothic, Renaissance, Baroque, 'art nouveau', cubism ... Ndị hụrụ nka n'anya ga-enwe ọ thisụ na obodo a karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Ihunanya » Ebe a na-eme njem maka ihunanya